प्रसार प्रसारको अभावमा धादिङ झार्लाङ्गको तातोपानी ! | Diyopost - ओझेलको खबर प्रसार प्रसारको अभावमा धादिङ झार्लाङ्गको तातोपानी ! | Diyopost - ओझेलको खबर
प्रसार प्रसारको अभावमा धादिङ झार्लाङ्गको तातोपानी !
बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७८ | ०:२०:१०
धादिङ – खनियाबास गाउँपालिकामा स्थित झार्लाङको तातोपानी क्षेत्र प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । देशभरका अन्यत्र तातोपानी क्षेत्रहरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू ओइरिरहँदा काठमाडौँ नजिकै रहेको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस क्षेत्रको भने खासै चर्चा सुनिँदैन ।
नेत्रावती (आँखु खोला) किनारमा अवस्थित यस क्षेत्र जिल्लाकै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । जिल्ला सदरमुकाम धादिङवेशीबाट करिब पाँच घण्टाको यात्रामा यहाँ पुग्न सकिन्छ । साबिकका दार्खा र झार्लाङ गाविसको सिमाना रहेको डुन्डुरे खोलामा गाडी रोकेर करिब १५ मिनेट सिँढीको बाटो हुँदै नेत्रावती किनारैकिनार ओर्लिएपछि तातोपानी क्षेत्रमा पुगिन्छ ।
बाफिलो तातोपानीको तिरतिरे धारामा स्नान गर्न गोर्खा र नुवाकोटसम्मका मानिसहरू आउने गर्दछन् । यहाँ लेकाली धूप र नदी पूजा पनि गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । यहाँ स्नान गरेपछि छाला र नसाको उपचार हुने आम जनविश्वास पनि जीवित छ ।
हरेक तातोपानी क्षेत्र धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । तातोपानी क्षेत्रहरूको जति महिमा छ, उति संरक्षण र व्यवस्थापन हुन् नसकेको पाइने गरेको छ । खनियाबास गाउँपालिकाले डरलाग्दो पहरो खोपेर सिँढी हालेर यस क्षेत्रको संरक्षणमा चासो देखाएता पनि तातो पानी कुण्ड र सिंढी, शौचालय व्यवस्थापन भने अझै बाँकी रहेको छ ।
“रेलिङ हाल्न र तातोपानीसम्म जाने सिँढी निर्माणको लागि ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ । डीपीआर पनि तयारी अवस्था छ, हामी यस क्षेत्रलाई जिल्लाकै पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ”, पालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार तातोपानी क्षेत्रको वृद्धिविकास एवं प्रचारप्रसार नेपाली काँग्रेसका नेता तथा बाग्मती प्रदेशका सांसद डा.राजाराम कार्कीको संयोजनमा अघि बढिरहेको छ ।